Usilika Fibroin Nano / Microspheres - China Simatech
Lo mkhiqizo bhila usebenzisa sesinyathelo esisodwa, indlela kuphela-free, futhi kuhlinzekwe njengoba noma amanzi ukumiswa noma powder lyophilized, okungase kalula kabusha ziyoncibilika emanzini ngaphambi kokusetshenziswa.
Alternative igama: Usilika fibroin ama-nanoparticles / microparticles
Usilika fibroin micro- amaprotheni ezisekelwe futhi nanospheres ukunikeza izinketho ezintsha ngoba izidakamizwa ukulethwa nezinye izinhlelo zokusebenza ngenxa biocompatibility zabo, biodegradability futhi tunable izidakamizwa ukulayisha nokukhululwa izakhiwo, ikakhulukazi amaprotheni / peptide izidakamizwa nezidakamizwa amanzi-zingaxazululeki. I okusezingeni eliphezulu encapsulation kahle futhi luyalawuleka izidakamizwa ukukhululwa kinetics bungatholakala ngokusebenzisa ukulawula crystalline okuqukethwe beta-Ishidi usilika izinto.
nokuphathelene usilika nano yethu / microspheres kuthiwa bhila usebenzisa sesinyathelo esisodwa, indlela kuphela-free, futhi zinikezwa njengoba noma amanzi ukumiswa noma powder lyophilized, okungase kalula kabusha ziyoncibilika emanzini ngaphambi kokusetshenziswa.
Sepharamitha kanye izakhiwo
Usayizi nanosphere: kungenziwa kuhluka uhla 100-1000 nanometer;
Usayizi microsphere: kungenziwa kuhluka uhla 1-100 micrometer
Figure 1 EM kasilika fibroin nanosphere (500 nm) Figure 2 EM kasilika fibroin microsphere (2-3 μm)
Lo mkhiqizo umkhiqizo ngokwezifiso. Singanikela uchungechunge nanospheres noma microspheres futhi ngaphandle izidakamizwa ukulayisha ngokuvumelana izicelo zakho.
Previous: Usilika Fibroin ukungena nakwamanye amazwe lijikeleziswe
Okulandelayo: Invisible futhi Peelable Usilika Fibroin Film
Usilika Fibroin Microparticles
Usilika Fibroin Microsphere
Usilika Fibroin nanoparticles
Usilika Fibroin Nanospheres
Usilika Fibroin Amaphrotheni Microparticles
Usilika Fibroin Amaphrotheni Microspheres
Usilika Fibroin Amaphrotheni nanoparticles
Usilika Fibroin Amaphrotheni Nanospheres
Usilika Amaphrotheni Microparticles
Usilika Amaphrotheni Microspheres
Usilika Amaphrotheni nanoparticles
Usilika Amaphrotheni Nanospheres